"Sony Iksperiya M2 Aqua" yethulwa ngo-Agasti 2014, ngenkathi yokuthengisa zedivayisi aseqalile kamuva. Yiqiniso, i-smart phone ayikwazi ngokuthi kwezinye kudivayisi eziphambili, kodwa empeleni namuhla, siyindlela kuhle, kuhle kakhulu. Isimanga siwukuthi kodwa abaningi indiva idivayisi iphinde akudingeki isikhathi sokulungisa iziphi izinzuzo "Sony Iksperiya M2 Aqua" futhi lokho ine izici lobuchwepheshe.
Ngokubukeka smartphone inedizayini kunalokho ajwayelekile, efana Smartphones, eyakhululwa ngo-2014 - umumo ejwayelekile unxande nge ajikelezayo, emaphethelweni hhayi kakhulu ezitshekile, khona ngokugcwele uqondise ubuso misa, futhi ukusetshenziswa design nokuphathelene Omni Balance umqondo.
In the version yokuqala M2 ezingemuva ohlangothini ingilazi likhona, kuyilapho "M2 Sony Iksperiya Aqua" ifakwe ikhava yangemuva, eyenziwe ngepulasitiki ekhethekile Frosted. Ngokwazi lokhu inketho, kuyodingeka ukuxazulula abasebenzisi, njengoba umuntu ikhange nakakhulu kubonakala plastic, kuyilapho abanye bepha ifasitelana ntandokazi. Njengoba ngenxa yokuthi liyasiza, plastic, esebenzisa "Sony Iksperiya M2 Aqua", okuhlala isikhathi eside kakhulu futhi enokwethenjelwa.
Idivayisi itholakala ngemibala emithathu eyisisekelo - brown, abamhlophe nabansundu. Uma ukhetha phakathi lezi amadivaysi, ochwepheshe abaningi ngokushesha bathi udinga ngokucacile makudle zabo hhayi onobuhle abamnyama, ngoba phezu zeminwe njalo ngokwanele, futhi, ngomqondo obanzi, igajethi unohlobo silula.
Ngokusetshenziswa a ukungena nakwamanye amazwe impahla plastic kokuba surface anolaka, kanye imiphetho nepokatym kanye emakhoneni ebukhali ezimbalwa "Sony Iksperiya M2 Aqua" kahle ngesandla akusho ngisho bacabange agxumele ngesikhatsi kokuhlinzwa. Kule ngombono, idivayisi ubukeka kangcono kakhulu kunokuba Z3 Compact noma M2, njengoba kulezi onobuhle likhona emzimbeni ngokwanele eshelelelayo smartphone akunakwenzeka thembeke agcinwe kule isandla. Ngaphezu kwalokho, ungakhohlwa mayelana ukuthi ubuso bushelelezi futhi abakuvumeli ukuba kahle ukukhulisa endaweni evundlile flat.
Ubukhulu lokhu okujwayelekile smartphone, kodwa abantu abaningi bathi isisindo libanzi inxa zombili phambi igajethi plastic. Ngaphambili ohlangothini ivikelwe ingilazi ezikhethekile, abakhiqizi akazange anikeze ukwaziswa okuqondile mayelana le nto. Into kuphela Kuhle kokusho - liwukuthi nakuba izazi ziye ihlolwe Ukucaciswa 'Sony Iksperiya M2 Aqua', awuzange waphawula iyiphi chips noma imihuzuko. Ngokufanayo, akukho umonakalo kwaphawuleka phezu kwesembozo sangemuva.
Ukufakwa lobunikazi lokhu design ukusetshenziswa plastic ayevumela uphela ezinhlangothini. Ngenxa yalokhu, le-smart phone ekulesi ukubukeka ekhangayo futhi uhlukile kwamanye amadivaysi ezifanayo kuzo izici lobuchwepheshe kanye nabangaphandle.
ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe quality Yakha lokhu igajethi, ngoba ngesikhathi operation awusebenzi ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana noma yimuphi umsindo nezingahlobene nendaba, nengxenye yalo engemuva ingxenye akusho bend kuze ibhethri.
Ukucaciswa 'Sony Iksperiya M2 Aqua' futhi kuhluke esinye isici esibalulekile - kuyinto ukusetshenziswa Ukuvikelwa okukhethekile yokulwa umswakama nothuli. Ngakho, idivayisi libhekene oxhumana Ukuvikelwa eliphezulu ngokwedlulele kusuka ngokweqile uthuli ekuqongeleleni, futhi ngokuvumelana onjiniyela, idivayisi kungaba ngendlela evamile kwamanzi ngesikhathi engaphezu imitha ukujula. Uma, ukwenza isibonelo, kule oyisibonelo Z3 Imigudu olahlekile ngokuphelele, khona-ke 'Sony Iksperiya M2 Aqua "Izibuyekezo bathi lezi Imigudu akuzona nje lapho, zinhle ngokwanele ngempela ukugcina umswakama.
Yiqiniso, isimiso, uthuli akuyona usongo zesimanje, kodwa nokuvikeleka idivayisi kusukela umswakama, akungabazeki, inzuzo ayo ayinhloko. Ikakhulukazi isivikelo esinjalo kube mnandi uma ucabanga izindleko "Sony Iksperiya M2 Aqua." "I-Messenger", isibonelo, inikeza ukukhokha ruble 12.500 kule divayisi.
Athole isivikelo, kufanele unake kakhulu uhlaka ezibanzi, njengoba kusengathiwa ngenani elithile ukuze ukhokhele izinto kudivayisi azigcina kahle yako kungakhathaliseki ukuthi isimo sezulu. On the "Sony Iksperiya M2 Aqua" Izibuyekezo bathi idivayisi usasebenza ngisho ngephutha lawisa ke odakeni.
Ingxenye engenhla phambi iphaneli kuyinto ikhamera, inzwa, futhi inkomba imicimbi aphuthelwe. Kuyaphawuleka ukuthi isikhulumi akahlukile ivolumu kangaka, kodwa inikeza quality enhle kakhulu umsindo. Njengoba isebenzisa ethuthukisiwe Ukuvikelwa uthuli, umklamo ayivumeli ukunikeza umsindo ecacile kakhulu futhi sonorous, kodwa namanje izinga uhlala ezingeni eliphezulu. Futhi phezulu idivayisi elise umgodi we-earphone, okuyinto, efana nezinye izakhi, ekuqaleni kufihlwe ngemuva cap plastic. Uma kudingekile, lapha ungaxhuma izesekeli "Sony Iksperiya M2 Aqua."
Ngaphansi kwesikrini kukhona i-microphone. Kuyaphawuleka ukuthi, ngokomthetho, uzozwa evamile, kodwa ngokuvamile 'Sony Iksperiya M2 Aqua "Izibuyekezo ikhasimende ukuthi ngakolunye uhlangothi izwi tube kancane abayizithulu. isikhulumi Ihendisfri ivuliwe phansi futhi ivikelwe anezikhala metal.
ngokukhethekile kufanele inikwe ukuthi ilungelo ezibekwe slot imemori khadi ejwayelekile microSIM simkarty, okuyinto ngempela elula. Eduze lapha inkinobho amandla round, lapho i touch ezinzima kakhulu futhi elukhuni futhi Inkinobho mncane ukuba ulungise ivolumu efonini yakho.
Isibuko e apharathasi ilingana 4.8 amayintshi, kodwa ubukhulu bomzimba ezibekiweko 60h107. Ngu "Sony Iksperiya M2 Aqua," isitatimende lithi esikrinini kukhona ezikhethekile enamathela anti-glare elikuvumela ukusebenzisa idivayisi kunoma iyiphi indawo, kodwa amakhasimende Izibuyekezo kungashiwo ukuthi enamathela akuyona njengoba nomphumela njengoba kungase kubonakale efika kuqala . Futhi kukhona i enamathela oleophobic, elenziwe ezingasehlela akuyona indlela engcono, kodwa namanje ikuvumela ukumane ngisuse beminwe, kanye ihlinzeka ukunyakaza abushelelezi iminwe.
I "Sony Iksperiya M2 Aqua" izici ezibonisa ukuthi isinqumo isikrini 540x960 pixels, kuyilapho i-aspect ratio kuyinto 16:10. Ngo inqubo yokufeza ukuhlolwa ezikhethekile, kwatholakala ukuthi i-yiliphi inani yesithombe namanje esikhanya kakhulu, ezingasehlela akuyona indlela engcono sazibonakalisa futhi gamma, onikeza, isibonelo, iphakeme kakhulu ukukhanya izithombe izigcawu amnyama, okwenza nokubukeka esilufifi noma flat. Futhi, babutha ezibucayi blue sabhalwa, futhi ikakhulukazi ke waboniswa ukuthi uma idivayisi isebenza iLuminance aphansi.
Ngakho, singasho ukuthi ifoni "Sony Iksperiya M2 Aqua" ihlukile-matrix ulula, okwenza isithombe ukumboza onsomi noma ophuzi-engela ezithile. Futhi, idivayisi ngendlela engcono izibonakalisa elangeni, ngisho ukuthambekela kancane ukuqonda esibukweni isithombe cishe kungenakwenzeka.
"Sony Iksperiya M2 Aqua" (izithombe zazo ungabona ngenhla) isebenzisa non-esikhiphekayo lithium-ion battery kabani umthamo 2.400 mah. Ngokusho umenzi, idivayisi kumodi yokulinda ongaqhuba amahora 641, inkulumo isikhathi - amahora 11 futhi njalo komculo - amahora 37. Uma njalo ukubuka ividiyo, ukusebenza kwe-idivayisi ngeke anele angaphezulu kwangu-8.
Phakathi ukuhlolwa kwatholakala ukuthi, ngokomthetho, lolu lwazi kuyiqiniso, futhi ngempela isikhathi egajethi indinganiso yesimanje Android-smartphone alesi sigaba, okungukuthi, ukuthi isebenza amahora angu-10, uma lisetshenziswe imodi kuqhathaniswa asebenzayo ngokuxhumeka inthanethi. Uma ufuna ukudlala ke kufanele ulindele amahora cishe izingalo ezimbili nengxenye uma ufuna ukudlala ngesikhathi ukukhanya okugcwele ivolumu okukhipha kusukela isikhulumi.
ukunakekelwa okukhethekile ochwepheshe ngokuvamile bakhokhe ukuze inkampani ezimbalwa ngokuvamile igcinwa kwi-enikeziwe AC, kangangokuba ishaja evamile kuyodingeka uyigcine uxhumeke kwi-amapayipi amahora amathathu.
Njengenjwayelo, kule smartphone isebenzisa kanyekanye amamojuli ezimbili. Ikhamera akha kuyinto 8 MP futhi ifakwe i-otho focus, kuyilapho phambi idivayisi akunakwenzeka ukujabulisa izinga ubani, njengoba nje iye 0.3 kuphela MP.
Ngisho main kwikhamera kungenziwa ngokuthi ebuthaka kuqhathaniswa, kodwa eqinisweni iqembu wahlanganyela ukuthuthukiswa software ezifanele, akwazi ukwenza okuningi nge-ubuchwepheshe esetshenziswa lapha. Yiqiniso, imininingwane ungeyena elilungile kakhulu, kodwa ukunciphisa umsindo isebenza abangaphezu kuka kahle. Ungenza izithombe egqamile ngokwanele ebusuku, okuzokwenza ukuthi ilahlekile zonke izinhlobo "zobuciko", futhi efanayo walondoloza kahle nokulinganisela elimhlophe. Ngakho, ikhamera ngempela okudingeka bashintshashintshe ngayo futhi efanelekayo izikhathi ezahlukene, kodwa ungalindeli eminye imiphumela Amazing.
On the front ikhamera ukukhuluma akunandaba mqondo, njengoba zonke iminyaka engu-10 edlule kwadingeka isikhathi ukubazi nalokho kuyinto ikhamera 0.3 MP. Mhlawumbe abanye wabona le mfanelo manje ucabanga ifoni yabo ulenga noma zilimaze, futhi sizodingida indlela kabusha "Sony Iksperiya M2 Aqua."
"Steel Butterfly" Manyachny Thriller. Abalingisi kanye izindima
Ukulima Private (LPH) imiqondo esemqoka ukuqaqwa